Hangers Factory, mpamatsy - Mpanamboatra Hangers China
UL & FM dia nitanisa ny andraikitra mavesatra Clevis Hanger nandrisika
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny mpanantona mavesatra ataonay dia eken'ny UL & FM. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient, Eoropa ary Azia. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
UL dia manana lisitra maivana ho an'ny Clevis Hanger ho an'ny varotra mivantana amin'ny orinasa
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ankatoavin'ny UL izahay. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Copper Plated Duty Clevis Hanger ho an'ny varotra mivantana amin'ny orinasa
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny mpangalatra varahina maivana varahina dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
UL & FM Hanger Swivel Ring Hanger ho an'ny varotra mivantana amin'ny orinasa
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, dia nahazo fankatoavana ny UL & FM izahay. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient, Eoropa ary Azia. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.